Mareykanka oo jartay dhaqaalihii uu ku bixin jiray kaalmada Falastiiniyiinta – Radio Daljir
Mareykanka oo jartay dhaqaalihii uu ku bixin jiray kaalmada Falastiiniyiinta
Seteembar 1, 2018 6:36 b 0
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay kaalmadii uu siin jiray hay’adda QM UNRW ee gargaarka uu usoo marsiin jiray dadka reer Falastiin.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay go’aankan qaadatay kadib dib u eegis ay samaysay, sida ay sheegtay haweeney afhayeen ah oo u hadlay Mareykanka.
Afhayeenka madaxwayne Maxamuud Cabdaas ayaa ku tilmaamay tilaabada Mareykanka mid duulaan ku ah shacabka dalkiisa, waxaana uu sheegay ciqaabka noocan oo kalle ah inuu guulaysan doonin Mareykankana uu muujiyay sida uu dhexdhexaad uga ahayn doorkiisa xal u helidda Falastniyiinta ee gobolka Bari dhexe.
UNRW ayaa la’aasay sanadkii 1948dii dagaalkii carabta iyo Israaiil, waxaana maamulaysay qarashka ku baxaya boqolaal kun oo Falastiinyiin ah oo isugu jira dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo cuntada, dalalka ugu waawayn ee taageera mashruuca hay’addan ayaa kala ah Midowga Yurub, Sacuudi Carabiya, Jarmalka,Mareykanka iyo UK.
Madaxda Dowlad Goboleedyada oo ku shiraya Kismaayo iyo khilaaf..